‘आधा किलो आलु छानीछानी किन्छौँ तर, नेता चुन्दा आँखामा झण्डाको पट्टी बाँध्यौँ’ | Diyopost - ओझेलको खबर ‘आधा किलो आलु छानीछानी किन्छौँ तर, नेता चुन्दा आँखामा झण्डाको पट्टी बाँध्यौँ’ | Diyopost - ओझेलको खबर
‘आधा किलो आलु छानीछानी किन्छौँ तर, नेता चुन्दा आँखामा झण्डाको पट्टी बाँध्यौँ’
दियो पोस्ट आइतबार, बैशाख ११, २०७९ | १६:३२:३२
हर्क साम्पाङ राई
भोट भन्ने कुरा के हो ? यो कत्तिको महत्वपूर्ण छ । ‘भोट’ भन्ने कुरा माग्दा पाउने केरा होइन । गम्भिर भएर सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । लोकतन्त्र अर्थात नागरिकको शासन । लोकतन्त्रमा जनता अर्थात तपाईं हामीलाई सबैभन्दा ठूलो अधिकार दिइएको छ, त्यहो हो–भोट । भोट दिने अधिकार अर्थात मताधिकार । यो माओवादीको, यो जसपाको, यो राप्रपाको यसको कुरा के सुन्नु नभन्नु होला । किनभने हामी नेपालीहरुको ठूलो कमजोरी के छ भने आफूलाई मात्रै सबैभन्दा जान्ने सम्झन्छौँ । हामी कुरा सन्दैनौँ । कुरा नसुन्नु भनेको कुरा नबुझ्नु हो । कुरा नबुझ्नाले ज्ञानको अभाव हुन्छ । र, ज्ञानको अभाव नै दुखको मुल कारण हो । त्यसो भएका कारण तपाईंहरुले विना आग्रह पूर्वाग्रह यो कुरालाई सुनिदिनुहोला । भोट भन्ने कुरा कसैले माग्दैमा तपाईंले दिनुपर्ने कुरा होइन ।
हामी नेपालीहरुको ठूलो कमजोरी के छ भने आफूलाई मात्रै सबैभन्दा जान्ने सम्झन्छौँ । हामी कुरा सन्दैनौँ । कुरा नसुन्नु भनेको कुरा नबुझ्नु हो । कुरा नबुझ्नाले ज्ञानको अभाव हुन्छ । र, ज्ञानको अभाव नै दुखको मुल कारण हो ।
मेरो त काका उठ्नु भएको छ । उहाँलाई भोट दिनुपर्ला ! मेरो त साथी उठ्नु भएको छ उहाँलाई भोट दिनुपर्ला, मेरो त पार्टीबाट यो मान्छे उठेको छ उसलाई भोट दिनु त मेरो कर्म धर्म दुवै हो भनेर सोच्नु भनेकै गलत हो । परम्परागत ढंगबाट हामीले भोट हाल्दै आयौँ । त्यसैले हाम्रो देश यस्तो खालको संकटमाा फसिसकेको छ । विश्वको इतिहासमा नेपाल प्राचिनतम इतिहास भएको मुलुकमा पर्दछ । चीन भारत भन्दा धेरै पुरानो सभ्यता बोकेको हाम्रो मुलुक नेपाल आज किन के लगाउँ, के खाऔँ र कसो गरौँ भन्ने स्थितिमा हामी आइपुग्यौैँ ? बैंकमा गयो बैंकले पैसा भुक्तान गर्न सक्दैन । टाट पल्टिसकेको छ अवस्था ।
हामीले हाम्रो भोटको अर्थ बुझेनौँ । जथाभावी भोट हाल्यौँ । त्यसो भएको कारण तपाईं हामी नै पहिलो जिम्मेवार व्यक्ति हौँ । भोट भनेको कति महत्वपूर्ण कुरा हो भनेर हामीले आज बुझ्नैपर्र्छ । तपाईंंको एक भोटले यो देशको भविष्य कता लाने हो भन्नेकुरा निर्धारण गर्छ । पूर्व लानेकी पश्चिम, उत्तर लानेकी दक्षिण ! अन्धकारतिर धकेल्नेकी उज्यालोतिर उन्मुख गराउने भन्ने कुुराको निर्णय गर्ने अधिकार नै तपाईंको भोट हो । यहाँ मैले माग्दैमा मलाई दिनुपर्ने, अर्को पार्टीले माग्दैमा त्यसलाई दिनुपर्ने, बाबु बाजेले त्यही पार्टीमा भोट हालेका कारण त्यही पार्टीमा जानुपर्ने भन्ने होइन । साँचो कुरा के हो । सहि र गलत के हो । सही र गलत छुट्याएर तपाईंहरुले भोट हाल्नुपर्छ यसपाली ।
अब हामी छिट्टै नै दोस्रो श्रृलंका बन्छौँ की भन्ने अवस्था छ । साथमा रोजगारी छैन । दिनदिनै महँगी बढेर ढाड सेकिएको छ । यो अवस्थामा देश कसरी पुग्यो ? हामीले हाम्रो भोटको अर्थ बुझेनौँ । जथाभावी भोट हाल्यौँ । त्यसो भएको कारण तपाईं हामी नै पहिलो जिम्मेवार व्यक्ति हौँ । भोट भनेको कति महत्वपूर्ण कुरा हो भनेर हामीले आज बुझ्नैपर्र्छ । तपाईंंको एक भोटले यो देशको भविष्य कता लाने हो भन्नेकुरा निर्धारण गर्छ । पूर्व लानेकी पश्चिम, उत्तर लानेकी दक्षिण ! अन्धकारतिर धकेल्नेकी उज्यालोतिर उन्मुख गराउने भन्ने कुुराको निर्णय गर्ने अधिकार नै तपाईंको भोट हो । यहाँ मैले माग्दैमा मलाई दिनुपर्ने, अर्को पार्टीले माग्दैमा त्यसलाई दिनुपर्ने, बाबु बाजेले त्यही पार्टीमा भोट हालेका कारण त्यही पार्टीमा जानुपर्ने भन्ने होइन । साँचो कुरा के हो । सहि र गलत के हो । सही र गलत छुट्याएर तपाईंहरुले भोट हाल्नुपर्छ यसपाली ।
स्थानिय चुनाव के हो ?
आखिर के हो स्थानिय चुनाव । हामीले यो पनि बुझेका छैनौँ । नेपालको राष्ट्रिय नीतिलाई जमिनमा अवतरण गराएर कार्यन्वयन गराउने, लागु गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण निकाय नै स्थानिय निकाय हो । त्यति महत्वपूर्ण निकायको चुनाव हुँदैछ यसपाली । यो चुनावमा हामी कसका मान्छेलाई चुन्छौँ ? कस्ता वडा प्रतिनिधि, नगरपालिका प्रतिनिधिलाई चुन्छौँ ? यो विषयमा अत्यन्तै सुक्ष्म र मिहिन मुल्यांकनका साथ हामीले हाम्रा प्रतिनिधि छान्नुपर्छ । चुनाव भन्छौँ तर, त्यसको अर्थ बुझ्दैनौँ । भोट र चुनाव दुवैको अर्थ थाहा छैन । चुनावको अर्थ चुन्नु । चुन्नु भनेको छान्नु । छान्नु भनेको धेरैवटा मध्येबाट सबैभन्दा राम्रोलाई लिनु ।
तर हाम्रो देशमा चुनाव कसरी हुन्छ ? चुनाव आउने बित्तिकै म त यो पार्टीको भनिन्छ, पार्टीको झण्डाले आँखा छोपिन्छ । म उदाहरण दिने गर्छु । हामी पिकनिक जाँदा हाँडी फोर भन्ने खेल हुन्छ । त्यसमा एउटा व्यक्तिलाई रुमालले आँखा बाँधेर तीन फन्को घुमाइन्छ । पर, हाँडी राखिदिएको हुन्छ । उ अर्को तिर धुङमुङिदै गएर भइँमा हानेर आउँछ । हामी त्यो तरिकाले भोट हालिरहेका छौँ । चुनाव आउने बित्तिकै झण्डाले आँखा छोपेर चुनाव चिन्हलाई भोट हालेर आउँछौँ । पार्टीले चोर उठाएको छ भने चोरलाई नै भोट हालेर आयो । ज्यानमारा उठायो भने उसैलाई भोट हालेर आयो । देशद्रोही फटाहालाई उठाइदिएको छ भने उसैलाई भोट हालेर आयो । कुकुरलाई उठायो भने पनि उसलाई भोट हालिन्छ । मिस्टर रकी उठेको छ है हाम्रो पार्टीबाट भन्यो र उसको फोटो देखाएन भने त्यसैलाई भोट हालेर आउनुहुन्छ । भोली मिस्टर रकी त कुकुरको नाम पो भइरहेको हुन्छ ।
भोट दिएर जितेको कुकुर कुर्सीमा बस्नुपर्ने हुन्छ । यो खालको अन्धाधुन्ध तरिकाले भोट नहालौँ । हामी नेपालीहरु एक किलो आलु किन्दा एक बोरा रासबाट राम्रो टिप्ने नेपाली हौँ । आधा किलो टमोटर किन्दा हामी क्रेटभरी छान्ने नेपाली हामी । चार महिनामा च्यातिने लुगा लगाउनका लागि धरानको छाता चोकदेखि भानु चोक र भानुचोकदेखि छाता चोकसम्म छान्ने हामी नेपाली । आधा किलो मासु किन्यौँ भने ‘भाई बोसो नहालौँ है हड्डी पनि नहालौँ’ भन्ने नेपाली हामी । एक सय ग्राम कमि पनि नलिने हामी नेपाली । हामीले सबै कुरा छान्न र चुन्न जानेको तर, नेता किन चुन्न नजानेको ? आज देश चलाउने मान्छे छान्दा, कानुन बनाउने मान्छे छान्दा, जो ५ वर्षसम्म आफैमाथि शासन गर्ने शासक पनि हो । नगरपालिका चलाउने, वडा चलाउने मान्छे छान्दा खोइ त हाम्रो विवेक ?
त्यसो भएका कारण यो चुनाव पुरानो शैलीबाट होइन नयाँ शैलीबाट सोच्नुपर्छ । जसरी आधा किलो आलु किन्दा छानी छानी किन्छौँ त्यसरी नै छानी छानी छानी जोखी÷जोखी उम्मेदवार चुनौँ ।
मैले मेरो उम्मेदवारी दिनेबेला भनेको थिएँ । तलब बाहेक एक रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ । यदि एक रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेँ भने धरानको भानु चोकमा मलाई जुत्तै जुत्ताले हान्नु । भोलीपल्ट म राजिनामा दिनेछु । राजिनामा दिएको एक हप्ता भित्र म धरान छोड्छु । सात पुस्ता म धरान फर्कनेछैन । मैले मात्रै अग्नि परिक्षा दिनुपर्ने हो ? की कांग्रेस वा राप्रपाबाट आउने मान्छेले पनि भन्नुपर्छ । सबैले भन्नुपर्छ । सबैले त्यो प्रतिबद्धता लिनुपर्छ । त्यस्तो व्यक्तिलाई छानीछानी लिनुपर्छ तपाईंहरुले । हावामा पार्टी भनेको छ हिँडेको छ । २० वर्षदेखि पार्टीको झण्डा बोकेको छ । तर, त्यो झण्डाको अर्थ सोध्यो भने अहिले भन्न सक्दैन । त्यस्तोहरुको पछाडी हामी किन लाग्यौँ ?
धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका राई सामाजिक अभियान्ता हुन् ।
आइतबार, बैशाख ११, २०७९ | १६:३२:३२